Kulankii ergada xisbiga Mudarat-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulankii ergada xisbiga Mudarat-ka
La daabacay onsdag 31 oktober 2007 kl 15.25
Sida aad toddobaadkii horeba barnamijkayaga ku maqasheen waxaa Khamiistii ina dhaaftey magaalada Gävle ka dhacey kulan socdey afar malmood ee la soo gabagabeeyey malintii axadda oo ku begneyd 28-kii Oktoobe kulan sannadeedkii xisbiga Modarat-ka.
- Sida aan u arko xisbiga Mudarat-ku waa xisbi u dooda xorriyadda ruuxa., sidii uu noloshiisa u hogaamin kari lahaa.
Balse haddii ey jiraan horjoogyo dhaqaale, sida mantaba bulshada ka muuqata in haweenku qaataa musharooyin ka hooseeya ragga, eysan heysan tiro u dhiganta ee mamullada ka qeyb qaadata, w amid aan cadaalad ahyn una bahan inan gacan ka geysanno sidii an wax uga bedeli laheyn. Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha.
Xisbia Mudarat-ka ayaan aheyn mid horey loogu bartey iney isticmaalaan fikirka la xiiira waxa lagu magacaabo eminismada, iyadoona ey islamakaa jiran xubno xisbigaasi ka tirsan ee qaba in sida su’aasha loo soo bandhigey ey tahey mid laga soo min guuriyey xisiyada bidixda.
Boqolkii labaatan ayey wrbixinadu shegayaan iney raggu qaataan ama guryaha ku xannaaneeyaan dhallaanka kolka ey rerka ilmo ku soo zaa’idan.
Xisbiyada bidixda ayaa qaar badani u ololeeyaan in la sharciyeeyo 50% in ragga lagu waajibiyo iney hoowshaa dhankooda ka hantaan.
- Mar haddey muuqdan tallaaboyinkaa sinnaan la’aanta, waxey nala tahey in cashuurta oo la dhima tahey mid wax ka bedeli karta sidii ey hawenku suuqa shaqada dib ugu soo noqon lahaayeen sida ugu dhakhsiyaha badan, islamarkana u sahleysa raggu iney muddo intii hor eka badan ey guryaha ku xannaaneeyaan dhallanka sabiga ah.
Iyada oo ey sddex sanaood ku dhowaad ka harsan tahy xilligii doorashad ee sannadka 2010, aya haddana la ora karaa in xisbigasi bilaabey tartankii doorashada.
Hogaanka xisbiga ayaa la oran karaa inuu ku tallaabsaneyo dhabbooyin hore leh ee uu wax kaga bedelyo fkirradii xisbiga lagu yiqiin, iaygoona kulankan ka dhacay
degmada Gävle ey xubnihii xisbiga e eka qeyb qaadanayey taageero ku siiyeen sidii ey dhabbadaa isbedelka ugu sii socon lahaayeen.
Inkasta oo an illa iyo hadda la garan karen halka ey ka xariiqi doonan dhabada khadka ee siyaasaddooda la xiriirta habwa-naanag bulshadeedka lagu miisaaniyad geliyo cashuuraha dawladda soo gala iyo degmooyinka ey ka taliyaan xisbiyada awoodda dalak haya ee ku hamineya iibinta ama suuq geynta dhaqaalaha ey dawladdu mulkida u leedahey.
Doodihii leysku hardinayy mudadii afarta malmood ee kulanku u socdey ergooyinkii ka kala socdey xbnaha ururka Mudarat-ka, ayey ku caddadee in su’aalo dhowr ah oo doodo ka tagnayen la adeecey dhabbadii hoganka xisbiga. Kuwasina oo ey ka mid ahaayeen in aan wax laga bedelin habka shuruucda ee shaqada iyo shaqalaha.
In la aqbaley go’anka dwladda ee la xiriira dhimidda miisaaniyada ciidammada qalabka sida.
Sidoo kaleeto waxaa ka mid ah waxyaabaha kulankan lagu xasuusan doono in leysku racey fikir gudoonka xisbigu soo bandhigey e la xiriira in laga siman yahey habka sharcig guurka, haddey noqon laheyd rag iyo dhedig iyo haddey noqon lahaayen kuwo isku sinjiya ee lab nin ama laba habloodba. Su’ashan oo ey dood badani ka dhaln doonto kolka ey miiska u soo wada fariistan xisbiyada afarta ee ku xulufoobey awoodda dalka.
IYo sidaasi si la mid su’aasha keiya ee hoganka xisbiga Mudarat-ku codkiisii ku socon waayey kulankaasi ee la xiriita iibinta heyadda dawladda ee bakhtiyanasiibka ee lagu maacaabo Svenska Spel.
- Waa inaan annaga qudhayada dib ugu noqonaa sanduuqeena si aan u nadiifino, islamarkaana isugu daynaa inaan ku dhaqaaqno howlo la xiriira cimilada si meesha looga saaro muhiimadda xisbiga cagaarani ku leeyahey siyaasadda dalka Iswiidhen.
Sida uu sheegey Fredrik Reinfeldt, mar uu ka hadlayey xiritaankii kulansannadeedka xisbiga ee Axaddii la soo gabagabeeyey.